Self hoditra manify tantera-drano ny Adhesive Bituminous / fisaka manify tantera-drano tafo - China Xinle Hongtai tantera-drano
SBS godorao manify ...
Aluminum mifono ...
Godorao tantera-drano ...
Emulsioned asfalta fototra
Asfalta tsy tantera-drano ...
Godorao manify tantera-drano
Aluminum mifono PET sarimihetsika
Shina farany manify tantera-drano godorao productio ...
Godorao manify tantera-drano ny pamokarana
Asfalta farany hoditra manify tantera-drano Tar APP Fa Roa ...
Self hoditra manify tantera-drano ny Adhesive Bituminous / fla ...
Self hoditra manify tantera-drano ny Adhesive Bituminous / fisaka manify tantera-drano tafo
Type: tantera-drano manify
Marika Name: OEM
Hateviny: 3mm, 4mm
Fampiharana: tafo, metro, ambany rihana, manda, farihy, sns
Ambony ara-nofo: PE sarimihetsika, Aluminium foil, Sand, Schist flake, sns
Inforcement: polyester na fiberglass
Low hafanana manovaova: -30 ° C, -20 ° C
High hafanana manovaova: 70 ° C
Fitehirizana fe-potoana: iray taona
Weight: 30-50kg / horonan-taratasy
raharaha vita amin'ny hazo na pallet / Sal: Misy efa-mahaleo tena sy ny zo ho an'ny fanondranana Import.
10 andro taorian'ny nahazo 30% petra-bola
Self Adhesive Bituminous tantera-drano ny hoditra manify / fisaka manify tantera-drano tafo
polyester Self-adhesive Modified Bituminous tsy tantera-drano hoditra manify dia ahitana ny godorao ho toy ny singa lehibe, SBS, SBR sy tackifying resin toy ny Modifier sy ny polyester ho toy ny fanamafisana. Ny ambony dia ambonin'ny rakotra polyethylene (PE) film, fasika na strippable silisiôma sarimihetsika sy ny ambany ambonin'ny Voasaron'ny mivaky namoaka sarimihetsika.
1. Tackifying resin manome ny hoditra manify amin'ny adhesive mafy hery izay mety ho fonontselan'ny mifikitra amin'ny fototra mafy ambonin'ny.
2. Ny manify manana puncture tsara mahatohitra, baomba mahatohitra sy fananana Marokoroko sy mahatohitra ny polyester ho toy ny fanamafisana.
3. Ny fonontselan'ny dia mety ho tena fanasitranana ho an'ny triatra kely vokatry ny tontolo iainana.
4. Long-fotoana stickiness Manome toky tsy lavo-eny na leakage eo amin'ny hoditra manify sy ny faladiany ambonin'ny.
5. Ny hoditra manify dia manana hery sy tensile avo elongation tsara ny fananana, dia afaka foana na dia ny endriky ny raharaha triatra sy deformation teo am-pototry ambonin'ny.
6. Tsy misy Mandrotsaha fahamarinana amin'ny avo ny hafanana ary tsy misy triatra amin'ny ambany mari-pana.
7. Excellent simika fanoherana, harafesiny fanoherana sy weathering fanoherana.
Construction fomba sy ny tsara:
1) fototra fanadiovana
hanadio potipoti-javatra, lenta eny raha misy midona amin-maranitra, dia mety hanorina tsy misy rano, hamandoana no mamela.?
2) manomana ny taratasy manify tantera-drano ny
niely noho ny hoditra manify tantera-drano tamin'ny taratasy ny poti mitodika amin'ny ambany rihana, rehefa hanjaka ny mifanila lamba manify. mihaino ny hifanindry ny sisin'ny fampifanarahana ny hitandrina ny hifanindry tsy misy banga.
3) hifanindry mpiray tantera-drano taratasy manify
(1) hifanindry tantera-drano taratasy manify: Ravao eny ny Isolation manify ny Double-lafiny tena adhesive ny polymer teo ambonin'ny, Esory kasety nanakodia indray fitokana-monina horonantsary etỳ ambonin'ny, ary mifandray amin'ny coil dia handray ny petaka ny kasety, hanorotoro ny mamatotra mafy, raha ilaina ny kasety mety fanafanana, petaka ny vokany kokoa ideal.more nihanahay mba ho maina ny toe-piainana dia ampiharina.
(2) hifanindry mpiara hoditra manify tantera-drano ny taratasy: angady lakaoly tehina kasety rehefa afaka am-pofoana, fomba izany dia azo ampiharina ny mety ho tantera-drano sosona orana rano.
(3) Butt taratasy manify tantera-drano mpiray ocking coil mamatotra ara-nofo hanangana DNM coil, Coil nanapaka an esory ary mametraka ny lakaoly face niakatra, trea eny ambonin'ny mitokantokana rehefa manify, petaka ny ambony Butt ny coil, ary potika mafy ny manan-kery. ny fomba dia mety ho tantera-drano sosona ny mety ho ranonorana ny rano, dia afaka tsy toy izany fanafahana.
4) Asio tombo-kase ny fifanarahana:? DNM horonan-taratasy zoro ny Yin sy Yang sy ny node tsy mila fanampiny sosona fanorenana, fa lehibe coil fivarotana Mametaka vita aorian'ny node hiatrika ny tsipiriany momba ny rafitra dia amin'ny fomba feno sy ny tightness ny maso fanodinana , mikendry ny antontam lohany amin'ny tany ny ambany rihana, Bolt, fantsona ivoahan'ny sy tsipiriany hafa, dia tokony hanaraka consolidates amin'ny adhesive kasety, dia miborosy tantera-drano coating mba asio tombo-kase ny fifanarahana.
5) fikambanana fanekena
6) taty fanorenana: mba hamita ny fanorenana ny sosona tantera-drano, dia azo nanamafy mivaingana binding.d fitokana-monina sosona - Rehefa avy nametraka manify, hanorina fiarovana sy ny fitokana-monina sosona araka ny famolavolana sosona tantera-drano.
1. lavarangana, efitra fandroana, lakozia
2. tonelina, Industrial tafo
3. Flat sy sloped tafo
4. lakaly, Foundation sy ny fihazonana rindrina
Storage & fandefasana
Apetraho ny hoditra manify mitsangana.
Feno hazo mafy pallet ary miafina ao amin'ny hitakemotra sarimihetsika raha ny hitongilanan'ny
Mitandrema ny amin'ny afo mandritra ny fitehirizana sy ny fitaterana.
Fonontselan'ny dia tokony ho tehirizina maina sy ventilated eo ambanin'ny toe-javatra mba hiaro lavitra masoandro sy ny fivarimbariny.
Isika dia manome lanja fanadihadiana rehetra naniraka ho aminay sy haingana hahazoana antoka ny fifaninanana tolotra. Raha mba anay, dia afaka mampanantena ny toetra.
Mametraka izahay ny mba ho ao amin'ny fandaharam-potoana famokarana mafy mba hahazoana antoka anao marim-potoana fanaterana ny fotoana sy ny mandefa sambo filazana ho anareo raha vao ny baikonao no nalefa. Manaja ny hevitra izahay rehefa avy efa nandray ny entana.
Satria efa mihoatra ny 10 taona ny traikefa amin'ny orinasa tantera-drano, ny vokatra rehetra mifanaraka amin'ny fitsipika pirenena! Afaka mampanantena asa fanompoana tsara sy haingana delivery! Ny mba dia tonga soa na oviana na oviana!
Previous: manify tantera-drano farany asfalta pamokarana
Manaraka: Godorao manify tantera-drano ny pamokarana
godorao tantera-drano manify
godorao tsy tantera-drano
Bituminous tsy tantera-drano
Bituminous tantera-drano ny hoditra manify
Bituminous tantera-drano ny Products
Flat Roof tantera-drano manify
SBS Modified godorao Roofing Sheet
1.5mm-5mm SBS Modified elastomeric Wate godorao ...
3mm 4mm manify tantera-drano SBS novaina elasto ...
1.5mm-5mm SBS Modified bituminous Sheet Materia ...
APP novaina manify tantera-drano godorao
Self-adhesive asfalta manify tantera-drano ho an'ny W ...
Self-adhesive bituminous Sheet tantera-drano ny Ma ...